I-Anerobic Adhesive, i-Adhesive yoKwakha, i-Aqua Silicone Sealant-yeHuiti
Ngo-1997, yahlelwa kwakhona yaba yinkampani edityanisiweyo-Hubei Huitian Glue Co., Ltd. Kwaba yeyokuqala ukudweliswa kwishishini elinye ngo-2010, kunye nekhowudi ye-stock 300041.Kukho iziseko ezine zeshishini eShanghai, eGuangzhou, I-Changzhou, kunye ne-Xiangyang, egubungela ummandla we-1,300 eehektare, ngengeniso yonyaka ye-2 + yezigidigidi, ekhonza amashishini amakhulu ayi-8 eemoto, oololiwe abakhawulezayo, amashishini, elektroniki, unxibelelwano, i-photovoltaics, ukupakisha kunye nolwakhiwo. Inkokeli kushishino ngezona zikhulu kunye neengeniso eziphezulu eChina.
Owona mvelisi mkhulu wezixhobo zonxibelelwano-iHuawei; Esona sixhobo sikhulu sezithuthi zokuhamba sikaloliwe-i-CRRC; Eyona mveliso ibhasi inkulu emhlabeni-Yutong Bus; Esona sixhobo sikhulu semodyuli se-photovoltaic-JinkoSolar; Umenzi we-1 we-LED wokukhanyisa i-Philips; Ibhulorho yokuqala yehlabathi-eHong Kong-Zhuhai-Macao Cross-ulwandle Bridge; Esona sikhululo seenqwelomoya esikhulu-eBeijing Daxing Airport;
I-Huitian, ngokuxhomekeke kukungaze inikezele ngumoya, ikhe yafumana ubunzima kwaye iimeko ezinzima, ngokusebenzisa ubunzima, ziba nkulu kwaye zomelele. I-Huitian ikhula njengeshishini elihamba phambili kushishino olunamathelayo e-China.U-Huitian usebenze ngokusondeleyo nabathengi abaninzi be-Fortune 500 kwaye bathathe inxaxheba kulwakhiwo lweqela leeprojekhthi ezikumgangatho wehlabathi
Umzi mveliso we-Photovoltaic
Isabelo sentengiso seshishini le-photovoltaic lelokuqala emhlabeni. Enye yazo zontathu yimveliso yehuiti esetyenzisiweyo.
Umzi mveliso we-LED
Isabelo sentengiso ye-LED yeyokuqala, kwaye sinentsebenziswano nabathengi abalishumi abaphezulu. Isabelo sentengiso se-NO.1 UkuSebenza nabo Bonke abathengi abaphezulu aba-10.
Kukho isabelo sentengiso esingama-37% kushishino lwezithuthi zorhwebo kwiimveliso zaseHuiti.Singumthengisi weYutong, Jinlong, Jinlv, Zhongtong, Haige, Futian, njl.
I-Huitian inikezele ngenkxaso ye-R & D kwaye yanikezela ngeprojekthi ephambili yokuncamathela kunye nokuvalwa kokuncamathela kwesakhiwo kwebhulorho kunye noqinisekiso lwemigangatho yeminyaka eyi-120.
I-HUITIAN ibonelela ngesixhobo esipheleleyo sokugcina amandla kunye nesisombululo sokubumba inverter.
I-380km / h i-CRH yesantya sokuqeqesha umthengisi weqhinga, umHuiti uphumelele uvavanyo olungqongqo lwe-800,000 KM
IHuiti isebenzisene noJinko kwimiba eyahlukeneyo kwaye ithengisa ngokupheleleyo eJinko ngaphezulu kwesigidi se-100 kwi-2018 ngaphezulu kwesabelo se-45%.
I-Huitian sele ingumboneleli wokuqala wokuncamathela kwi-YUTONG BUS, iglasi yefestile, izinto zokutywina kunye nesisombululo ngokubanzi. sinesabelo esingaphezulu kwama-70% kwisitywina seglasi sebhasi eYUTONG.
I-Huitian sele inembali yeminyaka eli-15 kushishino olunamathelayo lwe-elektroniki, ekufumaneni i-SGS, ul njl.
I-HT906Z yimodyuli ye-PV ye-RTV etywinayo esetyenziselwa ngokukodwa ukutywinwa kwesakhelo se-PV, ukunamathela kwebhokisi yokudibanisa kunye nokudibana komgaqo kaloliwe.
I-728 sisincamathelisi se-PU esincamathelayo esisetyenziselwa ukuprinta izinto eziphezulu zefilimu, esetyenziswa ngokubanzi kwifilimu yeplastiki / yeplastiki nakwifilimu eyenziwe ngeplastikhi. Le mveliso inempawu zokubambelela okukhulu kokuqala, amandla aphezulu okuxobuka kunye nokucaca okuhle, okunokuthintela ngokufanelekileyo ingxaki yetonela.
I-728 ine-viscosity ephantsi kunye nokuguquguquka okuhle emva kokunyanga, okulungeleyo ukutyabeka ngesantya esiphezulu. Kuvunyelwe ukwandisa uxinzelelo olusebenzayo phantsi kweemeko ezithile. Uqoqosho kunye nokuziqhelanisa nazo ziimpawu.
I-823A / 828B yindleko ze-PU ezingenaxabiso, ezingasetyenziswanga ikakhulu ezisetyenziselwa ukucoca phakathi kwefilimu yeplastiki kunye nefilimu eyenziwe ngesinyithi, isetyenziswa kakhulu kukutya, amayeza, imichiza yemihla ngemihla, ukupakishwa kwemizi-mveliso.
I-823A / 828B ine-viscosity esezantsi kunye nokumanzi okugqwesileyo, okunokuhlangabezana neemfuno zesantya esiphezulu se-lamination (450m / min).
I-5299 ezimbini zeCandelo leSilicone elisetyenziselwa ukubumba umbane kunye nezinto zombane kunye nezinto ezithile. Ngokukodwa ukubumba ngaphakathi nangaphandle kwimiboniso ye-LED. Ubushushu begumbi okanye ukufudumeza ukuphilisa. Ukusebenza okuphezulu kukugquma, ukufuma ubungqina, ukungqinisisa ukungcangcazela, ukumelana neekhemikhali.
Ukuncamathela kokusebenza okuphezulu kwe-9331 RTV yinto enye. Isetyenziselwa zonke iintlobo zokubopha kumatshini wokukhanyisa ophezulu, ukutywina, izixhobo zombane, ukudibanisa, izixhobo zombane, ukutywina kunye nokuvuza okuchaseneyo, ubungqina bokufuma, ukothuka, iifriji kunye nezixhobo zokuqinisa ukuqinisa.
9667 Amacandelo amabini Ulwakhiwo abicah Sealant ...
I-9335 sisiseko esine-multifunctional ekwakhiweni kwesilicone esetyenziselwa ngokukodwa iingcango, iiwindow kunye nokutywinwa kwendlu kwangaphakathi nangaphandle. Inokubambelela okuhle kwiminyango eyahlukeneyo, iifestile kunye nakwiziseko zemigca yokwakha, kwaye ikwalungele ukutywinwa ngokubanzi, kubandakanya iithayile zeglasi, ikhonkrithi, ulwakhiwo, ialuminium, njl.
Iglu ye-AB, isetyenziselwa ukusetyenziswa ngokubanzi, iimoto kunye neelori zokulungisa, uninzi loqoqosho olukhethiweyo, umthamo omkhulu othunyelwe kwamanye amazwe
I-Partner entsha ye-AB Glue inyange ubushushu begumbi ngokukhawuleza kwaye inokudityaniswa ngokuthe ngqo kumphezulu weoyile, ukulungisa iindawo ezivuzayo zetanki yeoyile, iitanki, imibhobho, iiflanges, abaguquli, isinki zokufudumeza kunye nezinye izixhobo. Ingasetyenziselwa isinyithi, i-ceramic, iplastiki, ukhuni kunye nokuziqinisa okuncamathelayo.
Awuyifumananga into obuyikhangela?
Icandelo lezithuthi zoRhwebo